रहस्यमय मुलुक उत्तर कोरियालि सासक उनको ‘मृ*त्यु’ सत्य कि अफवाह ?:: Mero Desh
रहस्यमय मुलुक उत्तर कोरियालि सासक उनको ‘मृ*त्यु’ सत्य कि अफवाह ?
Published on: १४ बैशाख २०७७, आईतवार १३:३०
काठमाडौं, उत्तर कोरियाका शक्तिशाली नेता किमजोङ उन मुटु रोगका कारण अस्पतालमा भर्ना भएको खबरको केही दिन पछि उनको मृत्यु भएको अफवाहरु फैलिरहेको छ । उक्त कुरा सत्य हो की होइन भन्दै चीन र अमेरिका सत्य तथ्य पत्ता लगाउन लागि परेका छन् । उनको
मृत्युको अफवाहहरु सत्य या झुट्टो हो भनि पत्ता लगाउन चीनले आफ्नो एक टोली पठाइसकेको छ । अत्यधिक गोप्य राष्ट्रबाट सत्य पत्ता लगाउन चीनले एक चिकित्सा टोली पठाएकोले अमेरिकाले यस अवस्थालाई नियालेर हेरिरहेको छ। ३६ वर्षीय किमजोङ उन स्वास्थ्य खराबीको कारण २ हप्तादेखि सार्वजनिक स्थलहरुमा देखिएका थिएन। उनको निधन भएको खबर चिनियाँ पत्रकार शिजियान सिन्जौले बताएकी खबर द सनमा उल्लेख छ । ती पत्रकारको सामाजिक मिडियामा १५ मिलियन फलोअर्स रहेका छन् । उनी एक विदेशी मन्त्रीको भतिजी पनि रहेको बताइएको छ ।
उत्तर कोरियाको एनके डेली एक अनलाइन खबरले किमको मुटुको सर्जरी अप्रिल १२ मा भएको दाबी गरेको छ । उनको निधन भएको केही खबरहरु आइरहेको छ । तर पुष्टि भने भएको छैन उनको मृत्यु भएको हो कि स्वास्थ्य अवस्था मात्र खराब भएको हो भन्ने बारे रहस्यमय मानिएको मुलुक उत्तर कोरियाबाट वास्तविकता आउन सकेको छैन् ।